Arsenal yakafara nemugovera weMugovera Heads Up FA Cup yekupedzisira - teles relay
Arsenal yakafara nemugovera weMugovera Heads Up FA Cup yekupedzisira
MaArsenal arikufara nemugovera weMugovera Heads Up FA pamutambo weChelsea nekuti vatambi vacho "vanoda kuchengetedza mwaka wedu" akadaro Alexandre Lacazette.
MaGunners, uyo akahwina rekodhi 13 FA Cup, apedza zvisere muPremier League uye haazokwikwidza muEuropa League kana vakarasikirwa kuWembley.
"Takarasikirwa nezvishoma zvezvinangwa zvedu," akadaro murwi weFrance Lacazette, 29.
Mikel Arteta weArsenal naFrank Lampard weChelsea vese vane chinangwa chekukunda mukombe wekutanga sevatariri.
Lacazette akawedzera kuti: “Rave riri risinganzwisisike gore. Isu takamira kwenguva yakareba, takachinja mamaneja [Arteta akatsiva Unai Emery munaDecember], taive nevatambi vakasiyana.
"Yaive mwaka yakaoma, pamwe yakanyanya kuomarara pabasa rangu, asi ndoziva ndakadzidza zvakawanda." Mukombe weFA unoreva zvakawanda. Ini ndakauya kuAustralia kuhwina mikombe. "
Zvichakadaro, mukuru weBlues Lampard akatsigira Winger Winan kuti aburitse imwe 'inonakidza' kuita mumutambo wekupedzisira musungo weBrazil usati wapera.
"Akatifadza. Anga achinakidzwa mwaka uno - aratidza maitiro akanaka, ”akadaro Lampard.
"Saka ini hapana chandinotarisira chero chakaderera pane izvo zvaakatoratidza, uye izvo zvaWilan iwe."
Frank Lampard, Didier Drogba naRoberto di Matteo - Zvinangwa zvikuru kubva kuChelsea yekupedzisira mukombe weFA
Mudziviriri weArsenal Hector Bellerin akapotsa kuhwina kukunda Watford sekungwarira nemhuru yakasimba, asi adzoka mukudzidziswa svondo rino.
Cedric Soares akasungirirwa mukombe uyu, neCalum Chambers, Pablo Mari, Shkodran Mustafi naGabriel Martinelli vachiri padivi.
Anokanganisa Chelsea vaviri N'Golo Kante naWillie vari vaviri muchikwata mushure mekukuvara.
Nekudaro, Ruben Loftus-Cheek akatambura nekukuvara kushoma pakudzidziswa nemusi weChina uye akatumirwa kuenda.
Cazorla, Parlor & Sanchez - zvibodzwa zvakanakisa zveArsenal mumutambo weFA Cup wekupedzisira
IZVI ZVINOGONA Kubva MOTD WOKUKURU
@Guymowbray: Iyo 139th FA Cup Cup yekupedzisira ichave iyo yekugadzira nhoroondo, yerudzi rwusina munhu waakuda.
Wembley isina vanhu vazhinji kuma fainari yaive chiitiko chisina kujairika, asi kuna ani zvake kuvapo kuitira mutambo wedu wegore rino? Idanho idzva rose.
Iwo FA vakaita zvese zvavaigona kuti vave nechokwadi chekuti vanogara vakasarudzika, kubva kumazwi eAkugara neni (pre-rekodhi naEmeli Sande kubva padenga renhandare) kune yakagadziridzwa tropu uye mharidzo yemharidzo, asi hazvigone kuti zuva ratove kukunda ini handina mufaro wakafanana uye mufaro wakafanana.
Zvirinani tinogona kuzvitarisira kubva mumutambo, mutambo wakaenzana pakati pemakirabhu akaiswa a kunakidza chaizvo kwekupedzisira makore matatu apfuura.
Inofanira kuva iri pedyo kupfuura iyo kuguma mwaka wadarika weEuropa League mwaka wevese, Arsenal hapana mubvunzo kuti iri kuvandudzika pasi paMikel Arteta - kuyedza kutevera George Graham kutamba uye kubata timu yeGunners Cup-yakakunda.
Frank Lampard anogona kuve wechitatu kuita izvi kuChelsea (mushure meGianluca Vialli naRoberto Di Matteo), aine mukana wekuisa chisimbiso mumutambo wekutanga uyo wakawedzera zvinotarisirwa chaizvo.
Ndinovimba mukwikwidzi achaita izvo zvakare, kupedza iyo yakareba, yakaomarara nyika yenyika nekumwe kunyemwerera kwakati.
Kukwereta mutsara kubva pandima yekupedzisira yekuGara neni - "Penya murima undiratidze matenga".
Kusiyana neyekupedzisira gore rapfuura pakati peManchester City neWatford, mutambo uyu wakaomesesa kudana.
Kune kutanga, ichave chiitiko chakasiyana kwazvo. Isu zvino tava kuziva kuti kumashure kwemasuo akavhara nhabvu inopusa, asi ichave iri mutambo unosiririsa.
Iyo yekupedzisira mukombe weFA, uye mutambo we derby zvakare, asi hazvisi chaizvo. Fans ichiri chikamu chakakosha chenhabvu, asi zvakatonyanya kana zvichisvika panguva dzaunokunda zvinhu. Pasina ivo paWembley hazvingadaro zvakafanana.
Ini ndichiri kutarisira mutambo wakanaka, zvakadaro, uye ndiArsenal wandinofunga kuti anouya pamberi pake.
Izvo hazvireve kuti Chelsea haina njodzi futi. Ini ndinongonzwa seArsenal yanga iine simba uye chivimbo izvozvi, asi zvikasadaro zvakaoma kusiyanisa zvikwata zviviri izvi.
Kufungidzira kwaL Lawro pamusoro paJosh Franceschi naWillie J Healey
Dave Sexton akavatungamira mukubwinya kwe1971 Mukombe Wokukunda Mukombe. Wokupedzisira muChirungu wekuchengeta Chelsea mumakwikwi makuru emukombe aive Glenn Hoddle mumutambo we 1994 XNUMX Cup, akarasikirwa neManchester United.
Musoro kusvika mumusoro
Arsenal vakunda yavo miviri yadarika yeFA Cup Fainari vachipokana neChelsea: 2-0 muna 2002 uye 2-1 muna 2017.
Nekudaro, veChelsea vakunda mimwe miviri yavo kusangana mumafainari makuru, vachienda 2-1 mumutambo we2007 League Cup uye 4-1 mumutambo wegore radarika weEuropa League.
Chekukunda kweChelsea chete mumakundano avo ekupedzisira eFA Cup neveGunners kwakauya mumakwikwi e2009 fainari.
Arsenal yakawana mukombe weFA Cup kokupedzisira makumi maviri nemaviri uye vakunda mukwikwidzi kagumi nematanhatu - kudarika chero rimwe timu. Vakapinda muchikamu gumi nemashanu muzana yevose fainari yeFA Cup.
MaGunners haana kurasa mukombe weFA Cup kuWembley kubva paakarasikirwa neWest Ham muna1.
Arsenal yapedza kunze kwePremier League yepamusoro nhanhatu mwaka uno kekutanga mumakore makumi maviri neshanu.
Ivo vakundikana kuwana mamineti mukati memitambo yavo yekupedzisira ye 31 FA Cup.
Iyi ndiyo yekupedzisira yeChelsea yegumi nemana yeFA Cup; chete Arsenal (14) neManchester United (21) ndivo vakawana zvimwe.
Vakangorasa imwe chete yemitambo yavo yekupedzisira yegumi nemishanu yeFA Cup.
Kubvira pamutambo wake weFA Cup muna 2013, Olivier Giroud akarova zvibodzwa gumi nematanhatu mumakwikwi aya - Sergio Aguero weManchester City.
MuFrenchman anovavarira kuva mutambi wechipiri kukwenya uye kutarisana nechikwata chakati (Arsenal) mumakwikwi eFain Cup eFA. Frank Stapleton akakwenya Arsenal kuAmanchester United mumakwikwi e1979 uyezve kuRed Devils mufainari ya1983 yakanangana neBrighton.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/sport/football/53546100
Napoli kusaina rekodhi kontrakiti yemuNigeria anorova Victor Osimhen
Cameroonia kaputeni weItalia 90, Tataw anofa